काठमाडौं। शहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले १८५ नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास योजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित रकमका सम्बन्धमा..
काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बन्दाबन्दीका अवधिमा मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट १०८ अन्तरराष्ट्रिय उडान भएका बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयको..
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारमा सरकारका तर्फबाट भएका कामका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र जनस्वास्थ्यमा महासंकट आउन नदिन तत्काल संसद्ले सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न अपरिहार्य भएको भन्दै सदनमा..
देशभरका क्‍वारेन्टाइनमा १६ सय ८४ महिलामाथि हिंसाः महिला संघ
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको भगिनी संगठन नेपाल महिला संघले लकडाउनको अवधिमा क्वारेन्टिनभित्र एक हजार ६ सय ८४ जना महिलालाई हिंसा भएको पाइएको बताएको छ। संघले आफ्नो जिल्लास्थित संयन्त्रमार्फत संकलन गरेको विवरण..
‘तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापनाको तयारी’ मन्त्री अर्याल
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सयुक्त लगानीमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापनाको तयारी भइरहेको बताएकी छन्। बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्री..
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सहमति जुटाउन सरकारले माग्याे समय
काठमाडौं, ३ असार । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे नेपाली कांग्रेसले पुरानै अडान लिएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि समय मागेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर..
खानेपानी मन्त्रीलाई प्रश्न: संविधानको धारा हेर्ने कि घरको धारामा पानी ?
काठमाडौं, ३ असार । राष्ट्रिय सभाकी सांसद अनिता देवकोटाले नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पिउन नपाएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधवारको वैठकमा खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई प्रश्न गर्दै उनले संविधानमा व्यवस्था..
नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्न माेदीले गरे अस्विकार
काठमाडौं, ३ असार । नेपालले २० मेमा आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर निशान छाप परिमार्जन गरेपछि भारतले तत्काल नेपालसँग वार्ता गर्न अस्वीकार..
कैलालीकाे क्वारेन्टाइन बलात्कार घटनाबारे प्रधानमन्त्रीकाे गम्भिर चासाे
काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले कैलालीको क्वारेन्टाइनमा गत जेठ ३२ गते भएको बलात्कारको घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जानकारी लिनुभएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घटना..
कालापानी निरीक्षणमा हिडे प्रधानसेनापति थापा र सशस्त्रका आईजी खनाल
काठमाडौं, ३ असार । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी नजिकै स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको आउट पोस्ट (बिओपी) निरीक्षण गर्न प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी शैलेन्द्र खनाल..
काठमाडाैं, २१ जेठ। यही जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न राजश्व विभागले दिएको निर्देशन नमान्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन लागू भइरहेको भए..
काठमाडौं, २१ जेठ । रुकुम मुसिकोट नगरपालिका वडा १३ का वडाध्यक्ष दीपक केसी नेतृत्वको एक समूहले वडा नम्बर १४ मा रहेको अस्थायी प्रहरी पोष्टमा आक्रमण गरेको छ । मंगलबार राति मदिरा सेवन..
काठमाडाैं, २१ जेठ। भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँगको सीमा विवाद वार्ताबाटै हल गर्न सकिने दोहोर्‍याएका छन् । रक्षामन्त्री सिंहले भारतीय टेलिभिजन च्यानल सीएनएन न्युज १८ लाई मंगलबार दिएको अन्तर्वार्तामा ‘नेपालसँगको..
सुर्खेत, २१ जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकले मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । कर्णाली प्रदेश..
परासी, २१ जेठ । नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको भू–भागसमेत स्पष्ट तोक्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा कुरा उठाउँदा सुस्ताको..
ताप्लेजुङ, २१ जेठ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु दुई लाख घुस लिएको अभियोगमा ताप्लेजुङका दुई सहायक वन अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका सहायक वन अधिकृतद्वय वीरेन्द्र..
काठमाडाैं, २१ जेठ। लकडाउनका समयमा जुवाखालबाट ९ जना ठूला व्यापारी रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् । सोमबार राति कमलादीस्थित गणगौर रिजेन्सी बुटिक होटलमा जुवा खेलाइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले छापा मारी ९..
काठमाडौं, २१ जेठ। काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी लकडाउनका कारण बिहान–बेलुकीको छाक जोहो गर्न कठिन हुने मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी राहतका लागि श्रम गर्नुपर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब महानगरपालिकाले तोकेको..
काठमाडौं, २१ जेठ । कतारबाट स्वदेश फर्किनै पर्ने नेपालीहरुले हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्च आफैंले बेहोनुपर्ने भएको छ । कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले एक विज्ञप्ति (सूचना) जारी गर्दै स्वदेश फर्किन..
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत मालपोत अधिकृत बद्रीराज ढकालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार अनाधिकृत रुपमा आर्जन गरेको..
पाल्पा। भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा रहेका एक पुरुषको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ। पूर्वखोला गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय पुरुषको युनाइटेड मिशन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख जीवन..
जाजरकोट। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीगाउँमा भएको घटनामा बेपत्ता युवाको शव पनि भेरी नदीमै फेला परेको छ। प्रहरीका अनुसार भेरी नगरपालिका–११ मटेलाका १९ वर्षीय गोविन्द शाहीको शव मंगलबार सोही..
काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम पश्चिम घटनामा सङ्लग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले सरकार कानूनको कार्यान्वयन गर्न पूर्ण..
काठमाडौं। सरकारले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणका कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा भारतबाट स्थल मार्ग हुँदै स्वदेश फर्कने क्रममा रहेका नागरिकलाई नेपाल–भारत सीमाका २० नाकालाई प्रवेश विन्दु तोकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका..
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा श्रेष्ठले नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि..
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। कोरोनासँग लड्न सरकारले हालसम्म लकडाउन बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी प्रयास नगरेको राप्रपाले जनाएको छ। क्वारेनटिन र..
काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले लकडाउको मोडालिटीमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउनको अवधि बढाइएको भए पनि तत्कालै लागु हुने गरेर मोडालिटी हेरफेर गर्न लागिएको हो..
रूकुम, २० जेठ। पाँच जनाको ज्यान जाने गरी पश्चिमरुकुमको सोतीमा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली जाजरकोट पुगेर छलफल थालेको छ । आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका उपनिर्देशक..
काठमाडौं, २० जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी विभाग भैरहवा रुपन्देहीका नापी अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले घुस लेनदेनको अभियोगमा नापी अधिकृत सरोज श्रेष्ठ,..
एजेन्सी, २० जेठ। प्रहरी नियन्त्रणमा अश्वेत नागरिकको हत्या भएपछि अमेरिकाका दर्जनौं सहरमा सुरु भएको प्रदर्शन देशव्यापी बनेको छ । बीबीसीका अनुसार कम्तीमा ४० सहरमा कर्फ्यु जारी गरिएको छ । तर प्रदर्शनकारीले..
Results 9727: You are at page7of 325